बाहिरै आउदैनन बोक्सीकाे अाराेपमा हुने घटना
कैलाली, कार्तिक ११
गत साल सबै तिर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रौनक थियो । गाउँ गाउँमा महिलाहरु अधिकारका लागि वकालत गर्दै थिए । ‘महिलामाथि हिंसा बन्द गरौं’ ‘नारी र पुरुष समान हुन्’ यस्ता लेखिएका प्ले कार्ड वोकेर महिलाहरु आवाज उठाइरहेका बेला एक महिला माथि भने यातना दिइदै थियो ।
सबैतिर नारी दिवसमा महिलाहरु रमाइरहदा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं. ५ देउकलियामा महिला पुरुषहरु रमिते बनेका थिए । १८ बर्षिय राधा चौधरी माथि कथित बोक्सिको आरोपमा मरणासन्न हुनेगरि कुटपिट हुदा पनि कोही कसैले केही बोलेनन् । उहाँ कुटिनुभयाे । सबै रमिते बने । उहाँ रोइकराइ गर्दै हुनुहन्थ्याे । कोही कसैले रोकेन । बरु उल्टै ताली बजाउदै रमिता हेर्दै थिए ।
राधाको पीडा गाउलेहरुले रमाउदै हेरिरहेका थिए । राधामाथि करिब ७ घण्टा कुटपिट भयो । न कुट्ने थाके न हेर्ने । गाउँकै ’भोलेबाबा’ भनिने रामबहादुर चौधरी र ’पार्वती माता’ भनिने किस्मती चौधरीले बोक्सीको आरोप लगाउँदै उनी माथि कुटपिट गरे । प्रहरी कार्यालयमा समेत घटना पुग्यो, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार ंमाध्यममा श्रृव्यदृश्य सामग्री फैलियो । कुटपिटबाट घाइते राधालाई उद्दार गरेर उपचारका लागि धनगढी पुर्याइयो । केही दिन पुनर्स््थापना केन्द्रमा राखेपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको पहलमा देउकलियामै एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनलाइ पुनर्स्थापना गरियो ।
कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिका ८ चमारीपुरकी ७८ बर्षिय अनीदेबी चौधरीलाई पनि बोक्सीको आरोपका कुटपिट भयो । २०७५ सालको जेठमा उनले त्यहीका २८ बर्षिय बिपतराम चौधरी बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिन । तर कैलाली जिल्ला अदालतले विपतरामलाई धरौटीमा छोडि दियो ।
केही वर्षअघि बोक्सी आरोपमा यातना पाएकी कैलालीको बेलादेवीपुर घोडसुवाकी ७० वर्षीया बृद्ध राजकुमारी रानाले न्यायको पर्खाइमा बस्दाबस्दै २०७१ पुसमा संसार त्यागिन् । २०६९ चैत २३ गते स्थानीयले बोक्सी आरोपमा उनलाई रुखमा हात बाँधेर कपाल मुण्डन गरी दिशा खुवाएर मानसिक तथा शारीरिक यातना दिए । उहाँका दाँतहरु तोडिए भने सौचालयको ट्याङकीको पानीको आहालमा उनलाई चोपियो । राजकुमारीका छोराले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यातना दिनेहरु बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरे । कोहि पक्राउ परे कोहि फरार भए । अहिले राजकुमारीलाई याताना दिनेहरु खुलेयाम घुमिरहेका छन । आफन्तबाटै कपाल मुण्डन गरेर दिशा खुलाईएकी रानाको मृत्यु भईसकेको छ । ‘आमामाथि भएको अन्यायको न्याय पाएनौ, अहिले पनि घटनामा संलग्नहरु खुलेयाम घुमिरहेका छन्’ रामकुमारीका छोरा दलबहादुर रानाले भन्नु भयो ‘घटनापछि आमाको बुढेसकालमा विक्षिप्त आवस्थामा मृत्यु भयो ।तर अहिलेसम्म न्याय पाउँन सकेका छैनौं ।’
यी कैलालीका सार्वजनिक भएका केही घटना मात्रै हुन । बढीजसो थारु गाउँमा यस्ता घटना दैनिक घटने गरेका छन । बोक्सी एक रुढिबादी परम्परा भएको र चौधरी समुदायमा धेरै गुरुवा,धामि झाक्रि मान्ने हुनाले यस्ता घटना थारु समुदायमा धेरै देखा परेको घोडाघोडी नगरपालिकाका थारु अगुवा कमल चौधरी बताउनुहुन्छ । यस्ता घटना रोक्नका चेतनाको आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
समाजमा बोक्सी हुन्छ, गुरुवा झाक्रिले ठिक पार्छ भन्ने रुढीबादी मान्यताका कारण गाउँका यस्ता घटना बाहिर आउदैनन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तीन वटा बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएका घटना दर्ता भएका छन भने यस बर्ष एउटा घटना दर्ता भएको छ ।
बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्नेहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन नसक्दा यस्ता घटनाहरुको बृद्धि भईरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) का प्रदेश नं ७ संयोजक खड्कराज जोशी बताउँनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘बोक्सीका धेरै घटना बाहिर नै आउदैनन, आएका घटनामा पनि कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको सजाय हुदैन ।’ घोडाघोडी नगरपालिका ५ निवासी राधा चौधरीमाथि भएको घटनाका आरोपितलाई जेल सजाय भएको छ । राधालाई लगातार सात घण्टा कुटपिट गर्ने ‘भोलेबाबा’ भनिने रामबहादुर चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पाँच वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । रामबहादुर अहिले कैलाली कारागारमा छन्। उनका सहयोगी किस्मती भनिने किस्मत चौधरीलाई एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, अर्की सहयोगी स्मारिका चौधरीलाई ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । तीनै जना अहिले कैलाली कारागारमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताउनुभयो ।
‘राधामाथि भएको घटनाको पुरै आधा घण्टा भन्दा बढी समयको भीडियो छ, त्यसमा रामबहादुर, किस्मती र स्मारिकाले पालैपालो कुटेको प्रमाण छ । त्यसैले अदालतले उनीहरुलाई कारवाहीमा परेका हुन । तर कतिपय घटनामा प्रमाणहरु नै नपुगेकाले पनि दोषीहरु उम्किने गरेका छन,’ महिला हिंसाको क्षेत्रमा कार्यरत ओरेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सरिता चौधरीले बताउँनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा बोक्सीको आरोपमा यातना र कुटपिटका ३ घटना दर्ता भएका छन । राधापछि कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ पुर्वटेढी निवासी २८ बर्षीया आँचली कुमारी चौधरीले सोही ठाउँका ४८ बर्षीय बैजा चौधरीले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट र यातना दिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी हाल्नु भएको छ । ०७५ बैशाख ५ गते परेको मुद्दा अहिले सुनावाईकै क्रममा छ । जिल्ला अदालत कैलालीले बैजा चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।
‘बोक्सीको आरोपमै परिवार, समाज, आफन्तबाटै बहिष्कृत हुनुपरेका धेरै घटना छन, पश्चिम तराईमा । झारफुकको नाममा माता, गुरुवा, धामी र झाँक्रीले कसैलाई बोक्सी हो भन्ने वित्तिकै उनीहरु माथि यातना सुरु भई हाल्छ’ ओरेक नेपालकै कार्यक्रम संयोजक विनु रानाले भनिन । ‘सामाजिक बहिस्कारको डरले कुटपिट र यातनामा परेका महिलाहरु खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन ।’ ५ बर्षको अवधिमा ओरेकमा बोक्सी आरोपका १४ घटना आएको जानकारी दिदै रानाले भनिन ५ ओटा मुद्धा दर्ता गरीएका छन, ९ घटनाको मिलापत्र गरीएको छ ।
गाउँभित्रका धेरै बोक्सीका घटनाहरु मिलापत्रमा टुंगिन गरेकाले पनि सार्बजनिक नहुने गरेको त्यस क्षेत्रका कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको बुझाई छ । कैलालीकै गदरियाकी एक विपन्न समुदायकी महिलाले पनि बोक्सी आरोपमा मानसिक सन्तुलन गुमाएकी छिन् , समाजमा अपहेलित हुने डरले उलने नाम भन्न चाहिनन ।
उनको घटना न प्रहरी सम्म पुग्यो न अदालत सम्म नै । उनलाई एक माताले बोक्सीको आरोप लगाइन् । बोक्सीको आरोप एक कान दुई कान हुँदै गाउभरी फैलियो । उनी बोक्सीकै आरोपमा आफन्तबाट बहिष्कृत भइन् । समाजले नै हेला गर्न थालेपछि उनको मानसिक अवस्था ठिक छैन । ‘अहिले उनी मानसिक रोगको नियमित औषधी खाईरहेकी छिन’ ईन्सेक संयोजक खडकराज जोशीले भन्नुभयाे ।
संघसंस्थाको प्रयास अपर्याप्त
बोक्सी प्रथा समाजको कुरिती हो, यो हुदै हुदैन भन्ने चेतना गाउँगाउँमा नपुगेको मानब अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था बताउछन । ओरेक नेपाल, महिला पुनस्र्थापना केन्द्रकी कार्यक्रम अधिकृत सरीता चौधरीले हिंसा प्रभावितहरुको न्यायका लागि पैरबी दिने काम गरिरहेको बताउँनु भयाे । ‘हामीले पीडितको ब्यवस्थापनका लागि उसको चाहाना बुझेर पुनस्र्थापित गर्ने गर्दछौ । हामीसंँग दिगो ब्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नभएकाले समुदायमा नै मनोसामाजिकविमर्श जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर घरपरिवारमा नै पुनस्र्थापना गर्ने गर्छौ’ उहाँले भन्नु भयो । ‘संघसंस्थाको प्रयास मात्रै यो कुरिती रोक्न प्रर्यात हुदैन ।’ राज्यले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘पीडित तथा उसको परिवारलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राज्यले गाउँ गाउँमा स्थानीय तहहरुको माध्यमबाट बोक्सी प्रथाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
ईन्सेक प्रदेश नंं. ७ संयोजक खड्कराज जोशी भन्नुहुन्छ, ‘संघसंस्थाको सीमिति दायरा हुन्छ, त्यो भन्दा बाहिर जान सकिदैन, तसर्थ यस्ता घटनामा राज्य तात्नुपर्छ ।’
बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ मा बोक्सीको आरोप लगाउनेलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय तोकिएको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था छ । बोक्सीको आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने, यातना दिने, कुनै किसिमले क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ ।